Fampiharana Android: hevitra, famoahana vaovao, maimaim-poana ary maro hafa! | Androidsis (Pejy 13)
Google manatsara ny sary amin'ny alina amin'ny Android miaraka amina fampiharana andrana
Ny fampiharana Google fanandramana ho an'ny Android dia mikendry ny hanatsara be ny sary amin'ny alina amin'ny fampiasana teknika fitifirana.
Wemogee, ilay fampiharana manampy ireo mpampiasa aphasia hifampiresaka
Wemogee dia rindrambaiko vaovao mifototra amin'ny emoji izay manampy ny mpampiasa aphasia hifampiresaka mahomby amin'ny hafa
WhatsApp Androidsis sy Androidsisvideo eo am-pelatananao amin'izay tianao
WhatsApp Androidsis no nomeraon-telefaona namelantsika ny Androidsis sy Androidsisvideo hihaino anao mivantana.
Ny fampiharana fampandrenesana mitsivalana amin'ny fomba Chat Heads tsara indrindra
Lahatsary video izay anolorako sy ampianariko anao ny fomba fampiasana izay ho ahy no fampiharana fampandrenesana mitsingevana tsara indrindra ho an'ny Android
Chrome 58 ho an'ny Android dia mitondra fanatsarana ny fisintomana sy ny tantara fitetezana
Ny Chrome 58 (58.0.3029.83) vaovao ho an'ny Android dia manatsara ny fitantanana ny fisintomana sy ny fitetezana tantara, ary koa ny fanatsarana ny fampisehoana.
Fampiharana 2 hanovana ny Android ho solosaina manokana
Eto aho dia mitondra anao horonan-tsary iray izay anolorako fampiharana roa izay hanampy anay hanova ny Android ho solosaina manokana. Farafaharatsiny amin'ny fomba fampiasana.
Coverfy, ilay fampiharana mandamina ny fiantoham-piainanao ary manatsara ny vidinao sy ny fandrakofanao
Coverfy dia mamela anao hitantana ny fiantohana rehetra azonao amin'ny efijery finday avo lenta hahazoana tombony tsara sy vidiny tsara kokoa. Ary maimaim-poana
Spotify dia afaka mandefa ny akanjo anaovany azy
Ny orinasa dia mitady manam-pahaizana momba ny fikirakirana fitaovana amin'ny fampiroboroboana ireo fitaovana entina mifandray amin'ny tambajotra sy ny serivisy mozika.
Ny fampiharana Android backup tsara indrindra
Androany ao amin'ny Androidsis dia manolotra anao izahay hisafidy izay misy amin'ireo rindranasa tsara indrindra hanaovana kopia voafafa ao amin'ireo terminal Android-nao
Inona no fantatr'i Google momba antsika?
Inona no fantatr'i Google momba antsika? Androany dia lazainay aminao ny fomba hahafantaranao hoe ohatrinona ny angona angonin'i Google momba anay, ary lazainay aminao koa ny fanovana azy.
Google Play Music dia mitondra fiasa manokana ao amin'ny Galaxy S8
Ny finday sy ny takelaka Samsung rehetra dia hampiasa ny Google Play Music manomboka izao ho toy ny mpilalao mozika default ary miaraka amina fiasan-tena manokana.
Ahoana ny fampiasana Android amin'ny tanana iray
Amin'ity fampianarana video azo ampiharina vaovao ity dia asehonay anao ny fomba fampiasana Android amin'ny tanana iray amin'ny alàlan'ny fametrahana fampiharana maimaim-poana tanteraka.
Fampiharana 5 izay hanampy anao hiala sasatra tsara kokoa
Sarotra aminao ve ny matory sa mifoha reraka ianao? Izahay dia manambara ny fampiharana tsara indrindra hanaraha-maso ny torimasonao ary hahita izay azonao atao hialana sasatra tsara kokoa.
Ny fampiharana mpitsikilo izay nampanantena ny fanavaozana farany ho an'ny Android dia napetrak'ireo mpampiasa an-tapitrisany
Mpampiasa an-tapitrisany no nametraka rindrambaiko mpitsikilo avy amin'ny Play Store izay nampanantena ny fanavaozana Android farany, hoy i Zscaler.
Ahoana ny fomba hamerenanao chat amin'ny WhatsApp amin'ny rakitra rakitra
Avy eo dia hazavaiko ao anatin'ny dimy minitra fotsiny ny fomba fanaovana kopian'ny WhatsApp resaka backup amin'ny rakitra rakitra
Afaka «mizara» mozika Spotify ianao amin'ny alàlan'ny Facebook Messenger
Ny Facebook Messenger dia hamela ny mpampiasa hizara "hira", ny playlists ary ny rakikira avy amin'ny Spotify sy Apple Music nefa tsy miala amin'ny app
Azonao atao izao ny mahazo fifanarahana amin'ny Spotify Premium amin'ny antsasaky ny vidiny, raha mpianatra ianao
Spotify dia mandefa ny tolotra natokana ho an'ireo mpianatra izay misy famandrihana tsirairay amin'ny Spotify Premium amin'ny antsasaky ny vidiny any amin'ny firenena vaovao 33
Tutorial video: Fomba 3 hanohana ny WhatsApp ivelany (hazavaina ao anatin'ny dimy minitra)
Tutorial video azo ampiharina Android izay ao anatin'ny dimy minitra fotsiny aho dia manazava fomba 3 hamerenana amin'ny laoniny ny WhatsApp ivelany.
Instagram for Android mandefa maody ivelan'ny seranana
Instagram for Android dia nandefa maody ivelan'ny seranana (tsy misy ifandraisany) hahafahanao mampiasa ny fampiharana rehefa tsy misy Internet, tena ilaina any amin'ireo firenena vao misondrotra.
Ny Google Earth vaovao dia eto miaraka amina endri-javatra sy fitaovana maro hafa hizaha izao tontolo izao
Google dia namoaka ny kinova Google Earth vaovao miaraka amin'ny fitsangatsanganana misy torolàlana, fomba fijery 3D ary maro hafa. Aza adino ny vaovao rehetra.
Quik, mpamoaka horonantsary maimaimpoana ho an'ny Android izay ho tianao [Quik navaozina tanteraka]
Quik dia mpamoaka horonantsary maimaimpoana ho an'ny Android, ary ny fanovana horonantsary dia toy ny lalaon'ny ankizy fa misy valiny matihanina.
Ahoana ny fomba hanovana PDF amin'ny JPG na PNG mora foana
Fampianarana azo ampiharina izay ampianariko anao hampiasa izay ho ahy no fampiharana tsara indrindra hanovana rakitra PDF ho JPG na PNG, manan-kery ihany koa ho an'ny epub sy maro hafa
Androany amin'ny Androidsis, izahay dia manome safidy anao miaraka amin'ireo fampiharana fiarovana tsara indrindra ho an'ny fitaovana Android
WhatsApp for Android dia hamoaka ny asany hanovana ny isa ary hizara ny toerana misy azy ankehitriny
WhatsApp ho an'ny Android dia hamela ireo mpampiasa hanova nomeraon-telefaona na hizara ny toerana misy azy ankehitriny amin'ny fifandraisana hafa.
Amin'ny alàlan'i Michelin, torolàlana tsara indrindra hankafizanao ny dianao
Izahay dia mitondra anao ny fampiharana tsara indrindra ao amin'ny Michelin Guide mba hahafahanao manomana ny dianao sy ny zotra gastronomic miaraka amin'ireo fampiharana maimaimpoana
Ahoana ny fomba hijerena, hanovana ary hamafana angona EXIF ​​amin'ny sary amin'ny Android
Raha te-hahita ianao, manova na mamafa ny angona EXIF ​​an'ny sarinao amin'ny finday Android, asehonay anao ny fomba mora indrindra hitantanana ity metadata ity.
Facebook Messenger dia mitovy amin'ny WhatsApp amin'ny mpampiasa mavitrika
Facebook Messenger dia nahatratra ny WhatsApp tamin'ny isan'ny mpampiasa mavitrika isam-bolana, zavatra izay toa tsy ho tratran'i Telegram mihitsy
Ahoana no hijerena Real Madrid - Barcelona 2017 maimaimpoana, ara-dalàna ary amin'ny kalitao HD
Ahoana no hijerena Real Madrid - Barcelona maimaim-poana amin'ny kalitao HD. Lalao izay hatao amin'ny 23 aprily 2017 amin'ny 20:45 alina.
In-Traffic Replay, fampiharana izay hiaro anao amin'ny loza mety hitranga amin'ny SMS rehefa ao ambadiky ny kodia ianao
Samsung dia namorona rindranasa antsoina hoe In-Traffic Replay izay hiaro anao raha mbola ao ambadiky ny kodiarana ianao amin'ny famonoana ireo fampandrenesana sy fitantanana ny SMS-nao.
Rindrambaiko fitoviana indrindra ho an'ny Android
Androany ao amin'ny Androidsis, izahay dia manome anao safidy vitsivitsy amin'ireo rindranasa fampitoviana tsara indrindra ho an'ny fitaovana Android, sahy manandrana ve ianao?
Fampiharana 2 hanome endrika hafa ny Android
Eto ianao dia manana rindranasa roa tena samy hafa hanomezana endrika hafa ny Android nefa tsy mila mpampiasa ROOT.
S8 Music Player ho an'ny Android
Mpilalao mozika ho an'ny Android izay manana ny anaran'ny S8 Edge Music Player te hanahaka ny asan'ny mpilalao mozika ao amin'ny terminal terminal
Google dia hampiditra ny Google Earth vaovao amin'ny herinandro ambony
Ny Google Earth vaovao dia hasehon'i Google amin'ny hetsika kasaina hatao ny 18 aprily. Ampahafantarinay ny sasany amin'ny vaovao mety ho entiny.
Fampiharana tena ilaina 4 ho an'ireo tia vorona
Ireto misy fampiharana efatra ilaina ho an'ireo tia vorona sy ornithologists vao manomboka mitady hiditra amin'ny tontolon'ny vorona.
Ny fampiharana mahaliana indrindra ho an'ny Android
Androany izahay dia manome anao safidy kely amin'ireo rindranasa mahaliana indrindra izay hitanao ao amin'ny Google Play Store, fantatrao ve izy ireo?
Ny rindranasa tsara indrindra hifehy ny terminal Android anao amin'ny PC
Ny rindranasa tsara indrindra izay ahafahanao mifehy ny finday Android-nao amin'ny solosainao PC na Internet-nao. AirDroid, Vysor ary fampiharana fanaraha-maso lavitra hafa.
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny fahitalavitra YouTube na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao amin'ny fampiharana Fake GPS Location
Voasakana ny YouTube TV any amin'ny firenena maro, saingy misy fomba iray hidirana amin'ny serivisy fahitalavitra vaovaon'i Google, amin'ny alàlan'ny fampiharana Fake GPS Location.
Ny Facebook Messenger dia mampiditra sosokevitra amin'ny alàlan'ny «M», mpanampy ny Artigence Intelligence
Facebook Messenger dia mandefa tolo-kevitra momba ny toe-javatra amin'ny alàlan'ny fanekena lohahevitra, teny na andian-teny sasany amin'ny alàlan'ny M, mpanampy amin'ny fianarana milina
Fifandraisana madio tsotra izao, ny fampiharana hanomezana hetsika amin'ny fihetsika amin'ny olona tiantsika indrindra
Pure Contact dia rindrambaiko iray ahafahantsika mamorona hetsika amin'ny fihetsika amin'ny olona tiantsika indrindra amin'ny Android.
Ny kinova Gboard vaovao dia manampy kitendry mitsingevana, soso-kevitra GIF mifototra ary maro hafa
Ny kinova beta farany an'ny Gboard dia mampiditra ny soso-kevitra GIF mifototra, kitendry mitsingevana ary safidy fanovana lahatsoratra vaovao
Twitter Lite, ilay kinova maivana izay manatsara ny fampiasana data sy tahiry
Twitter Lite dia kinova an-tranonkala amin'ny tambajotra sosialy izay zara raha maka habaka ary mavesatra haingana kokoa na dia misy fifandraisana malemy sy tsy milamina aza.
Ny endrika fiambenana tsara indrindra ho an'ny Android Wear
Androany ao amin'ny Androidsis dia mitondra safidy anao aho miaraka amin'ny sasany amin'ireo rindrambaiko miatrika fiambenana tsara indrindra ho an'ny famantaranandronao Android Wear
WhatsApp dia mikasa ny handefa ny fandoavam-bola isam-batan'olona any India ao anatin'ny enim-bolana
WhatsApp dia mikasa ny handefa ny fandoavam-bolan'ny isam-batan'olona any India alohan'ny faran'ny 2017, ary hanitatra izany amin'ny orinasa
Afaka mamorona fanadihadiana tsotra amin'ny Google Allo ianao izao
Ny rindranasan-kafatra fandefasan-kafatra Google Allo dia efa mamela ny mpampiasa hanao fanadihadiana tsotsotra sy haingana na dia voafetra be aza izy ireo
Ahoana ny fomba hanovana ny Samsung ho Samsung Galaxy S8. Miasa Bixby miasa !!
Ity misy fampianarana video tsotra ho an'ireo mpampiasa Samsung izay te hanova ny Samsung ho Samsung Galaxy S8, ary miaraka amin'ny Bixby active
Famantaranandro matory ho an'ny Spotify sy zavatra hafa. SURPRISE !!
Amin'ity lahatsoratra ity, ankoatry ny fitondrana anao mpamaky fotoana ho anao ho an'ny Spotify, ao amin'ilay horonan-tsary mifatotra dia mamela anao tsy ampoizina mahaliana aho.
Ireo mpikaroka rakitra tsara indrindra ho an'ny Android
Androany dia manolotra anao ny safidin'ireo mpikaroka rakitra tsara indrindra ho an'ny Android izahay hahafahanao mitantana, mizaha ary mitantana ireo rakitrao
Ahoana ny fomba handaminana ny fandefasana hafatra amin'ny tambajotra sosialy lehibeo
Eto ianao dia manana rindranasa na marimarina kokoa, fitaovana iray manontolo handaminana ny fandefasana hafatra amin'ny tambajotra sosialy lehibe.
Mpilalao mozika mahatalanjona ho an'ny Android !!
Eto aho avelako ity mpilalao mozika mahavariana ity ho an'ny Android izay azoko antoka fa iray amin'ireo tsara indrindra hitako maimaimpoana ianao.
Ny fampiharana mahaliana indrindra amin'ny Play Store
Ny fanangonana ireo fampiharana 5 mahaliana indrindra ao amin'ny Play Store, fantatrao ve izy rehetra? Aza adino ireo fampiharana mahasoa ireo amin'ny fitaovana Android anao.
Todoist dia nanambara ny fampidirana zanatany amin'ny Google Calendar
Ny mpitantana ny laharam-pahamehana Todoist dia manambara ny fampidirana roa tonta ny serivisy miaraka amin'ny Google Calendar, amin'izay manome fomba fijery mazava kokoa momba ny asa
[APK] Fampiharana iray izay mahatsikaritra ny mozika henonao ary mampiseho izany aminao ao amin'ny You Tube
Rindrambaiko izay manaiky ny mozika henoinao hampisehoana azy aminao amin'ny endrika clip video mivantana eo amin'ny You Tube, ankoatry ny fanomezana toro-hevitra mahasoa anao.
[APK] Ny safidy tsara indrindra amin'ny Google Play Store
Eto aho dia avelako ho anao aho anio izay heveriko fa ny safidy tsara indrindra amin'ny Google Play Store ary aiza no hahitantsika ireo fampiharana izay tsy ao amin'ny magazain'i Google.
Andoavam-bola, ny fampiharana fandoavam-bola vaovao eo amin'ny mpampiasa izay tokony ho fantatrao
Ny andininy fandoavam-bola dia ireo fampiharana fandoavam-bola vaovao eo amin'ny namana izay tena mora ampiasaina ary tsy misy karazana sarany na komisiona ho an'ny mpampiasa.
Ny kinova 7.0 an'ny IMBd ho an'ny Android dia ho tonga miaraka amin'ny fanovana lehibe eo amin'ny interface
Ny rindranasan'ny IMDb ho an'ny Android dia mahatratra ny andiany 7.0 mampiditra endrika vaovao manan-danja amin'ny fampifanarahana mpampiasa vaovao
Nangataka fiaraha-miasa amin'ny WhatsApp i United Kingdom
Nangataka fanampiana tamin'i WhatsApp ny United Kingdom amin'ny fanangonana vaovao hampandrosoana ny fanadihadiana ny fanafihana natao tany Londres tamin'ny herinandro lasa teo
Hanana 2 minitra hamafana ny hafatra WhatsApp ianao
Tsy dia misy fotoana firy amintsika hanonerana ireo hadisoantsika ary manana 2 minitra hamafana ireo hafatra WhatsApp alefa amin'ireo diso mpandray.
Ny fitendry azo ovaina indrindra ho an'ny Android
Eto ianao no manana ny ankehitriny fitendry azo amboarina indrindra ho an'ny Android. Kitendry izay ahafahantsika manova ny endriny iray manontolo.
[APK] [Tsy navoaka] Fampiharana «El Tiempo» ho an'ireo mpanandramana beta izay tena tsara tokoa
Eto ianao dia manana rindranasa El Tiempo tsy navoaka tao amin'ny Play Store ary amin'ny alàlan'ny programa beta testers ihany no azonao idirana azy.
[APK] Sintomy sy apetraka ny fakantsary sy ny galeraly HTC tany am-boalohany
Eto ianao manana ny apk ny fakantsary fakantsary HTC sy ny galeria apetraka amin'ny Android 5.0 na terminal avo kokoa.
Fampiasana Android O 5 azonao atao dieny izao amin'ny findainao
Tsy te hiandry ny fahatongavan'ny Android 8 ve ianao? Atorinay anao ny fomba ahazoanao miasa Android O malaza indrindra amin'izao fotoana izao amin'ny terminal Android rehetra.
Fampiharana hafahafa indrindra amin'ny Play Store (Volume I)
Androany izahay manome anao ny Volume I amin'ireo fampiharana hafahafa sy hafahafa izay hitanay ao amin'ny magazay fampiharana Google
Hangouts ho an'ny Android dia ho lany amin'ny asany SMS amin'ny 22 Mey
Nanoro hevitra ireo mpitantana G Suite i Google fa ny fanohanan'ny SMS amin'ny Hangouts dia hesorina tanteraka amin'ny Android aorian'ny 22 Mey.
Ny fampiharana tsara indrindra hanoratana maimaim-poana ny efijery Android anao
Eto ianao dia manana rindranasa vaovao, ho ahy ny fampiharana tsara indrindra amin'izao fotoana izao hanoratana ny efijery Android maimaimpoana ary tsy misy fetra na fari-drano.
BlackBerry dia miantoka ny fiainanao manokana amin'ny Privacy Shade
Ankehitriny ny ankamaroantsika rehetra dia manana smartphone miaraka amin'ny efijery lehibe kokoa, fiainana manokana ary fifandraisana akaiky ...
[APK] Azonao atao izao ny misintona sy mametraka ny Super Mario Run ho an'ny Android avy amin'ny Google Play Store, ary raha tsy mifanaraka ny terminal anao dia ity ny APK !!
Eto ianao manana rohy hisintomana sy hametrahana Super Mario Run ho an'ny Android, na dia milaza aminao aza ny Google Play Store fa tsy mifanaraka ny terminal anao.
Google Photos manafaingana backups amin'ny toe-javatra malemy fifandraisana
Ny Google Photos dia mampiditra endrika vaovao roa izay manafaingana ny backup ary ny safidy hizarana rehefa malemy ny fifandraisana amin'ny Internet
Google Maps dia hamela anao hizara ny toerana misy anao sy ny fivoaran'ny dianao
Ny fanavaozana ny Google Maps izay ho avy dia ahafahanao mizara ny toerana sy ny fivoaran'ny dia amin'ny fifandraisana rehetra
[APK] Sintomy ary apetraho ny fakantsary Asus PixelMaster amin'ny Android rehetra
Ny fandefasana ny filanao ho anao, eto izahay mitondra anao ny apk ampiasain'ny Asus Pixel Master Camera hametraka amin'ny Android rehetra.
Ahoana ny fomba hitsitsiana bateria betsaka amin'ny Android amin'ny alàlan'ny fampiatoana ny mode Doze amin'ny Android 4.1 na avo kokoa
Eto aho mitondra anao ny fampiharana tsara indrindra hamonjy bateria betsaka amin'ny Android amin'ny alàlan'ny fanerena ny mode Doze eo noho eo sy avy amin'ny Android 4.1
Ankehitriny miaraka amin'i Snapseed ianao dia afaka manambatra sary roa ho iray
Google namoaka kinova 2.17 an'ny Snapseed ho an'ny Android ao anatin'izany ny fitaovana Double Exposure izay ahafahanao manambatra sary roa ho iray
Ahoana ny fakana pikantsary lava
Amin'ity lesona manaraka ity dia manazava ny fomba fakana sary lava amin'ny fomba tena tsotra sy tsotra miaraka amina fampiharana maimaimpoana tanteraka.
Ny fampiharana tsara indrindra hamerenana sary amin'ny alàlan'ny fanesorana ny mombamomba na zavatra tsy ilaina
Eto ianao manana ny fampiharana tsara indrindra hamerenana sary amin'ny alàlan'ny fanesorana ny background na zavatra hafa na irina amin'ny fomba mandeha ho azy tanteraka.
Ny rindranasa tsara indrindra hitantanana asa amin'ny Android-nao
Androany ao amin'ny Androidsis dia manolotra safidy fohy izahay miaraka amin'ireo fampiharana tsara indrindra hitantanana asa amin'ny Android-nao
Fantatrao ve fa afaka mamerina fampiharana voaloa ianao?
Raha tsy fantatrao, ny fivarotana fampiharana Google dia manome anao fotoana ahafahana mamerina rindranasa iray aloa mba hamerenana.
[APK] Klaona Spotify maimaim-poana miaraka amin'ny endri-javatra Spotify Premium toy ny fisintomana mozika hihainoana ny tsipika tsy mandeha amin'ny laoniny
Eto ianao manana ity apk clone Spotify manaitra ity, maimaimpoana ary miaraka amin'ireo fiasa Spotify Premium toa ny fisintomana mozika hihainoana ivelan'ny Internet.
Ny fampiharana tsara indrindra hamoronana ny avatar anao manokana
Eto aho dia manolotra izay ho ahy no fampiharana tsara indrindra hamoronana avatar manokana ho antsika ary hampiasa izany ho piraofilina amin'ny tambajotra sosialy na hizara izany.
Ny fitendry Android tsara indrindra dia antsoina hoe Gboard, avy any Google izy ary io no atolotray antsika
Raha mitady ny fitendry Android tsara indrindra ianao dia aza hadino ity lahatsoratra miampy horonantsary ity rehefa asehoko anao ny zavatra rehetra atolotry ny Gboard antsika, miaraka amin'ny mpandika teny miaraka.
Fampiharana fampiasa tsara indrindra amin'ny WhatsApp
Na dia fantatsika aza fa ny WhatsApp dia mpanjakavavin'ny rindranasan-kafatra fandefasana hafatra eo noho eo, misy safidy roa tokony horaisina, Telegram sy Messenger.
Google mandefa Family Link, fifehezana ny ray aman-dreny ho an'ny Android
Manolotra Family Link izahay, serivisy fanaraha-maso ny ray aman-dreny natombok'i Google, mba hahafahan'ny ray aman-dreny mifehy ny fampiasana finday na tablette an'ny zanany.
Miverina ao amin'ny WhatsApp ny satan'ny lahatsoratra
Niverina nihemotra ny WhatsApp ary nanomboka nandefa fanavaozam-baovao izay misy ny fiverenan'ny fanjakana soratra mahazatra
Eto dia manana fomba hananana ny Black WhatsApp, ny Black Telegram ary ny fampiharana hafa amin'ny maody mivadika natao ho an'ny efijery AMOLED.
Ahoana ny fomba hanampiana sonia nomerika amin'ny antontan-taratasy avy amin'ny Android anao. (Ary fenoy izy ireo)
Tutorial video azo ampiharina izay asehoko anao ny fomba hanisy sonia dizitaly amin'ireo antontan-taratasy avy amin'ny Android ary tsy mila manonta antontan-taratasy.
[APK] Sintomy ary apetaho ny fakan-tsary Meizu MX6 amin'ny Android rehetra
Te-hametraka fakan-tsary Meizu MX6 amin'ny Android ve ianao ary tsy mila Root?. Ity ny apk sy ny tutorial tsotra momba ny fametrahana azy.
SwiftKey fitendry ho an'ny Android dia havaozina amin'ny feo
Ny rindrambaiko SwiftKey fitendry ho an'ny Android dia nohavaozina ary mampiditra profil vaovao efatra vaovao ho an'ny tsindry bokotra
[APK] [ROOT] Ahoana ny fametrahana ny fampiharana mozika an'ny Sony Xperia XZ Premium amin'ny Android rehetra (kinova farany)
Eto ianao manana ity lesona ity momba ny fametrahana ny kinova vaovao an'ny rindrambaiko Sony Xperia XZ Premium amin'ny Android rehetra.
Ampidiro ny Widget Google Pixel malaza amin'ny Android rehetra
Avelanay eto aminao ilay Widget Google Pixel Widget malaza hahafahanao mametraka azy amin'ny Android rehetra nefa tsy mila manova ny Launcher.
X Locker. Ny efijery fanidiana rehetra amin'ny Android anao: Samsung, Sony, LG….
X Locker dia rindrambaiko maimaimpoana ho an'ny Android izay mitondra anao ny lamba fanidiana rehetra toy ny Samsung, Sony, LG ary maro hafa ...
Ny fampiharana antso an-tsary tsara indrindra ho an'ny Android
Androany ao amin'ny Androidsis, izahay dia manome safidy anao miaraka amin'ireo rindranasa tsara indrindra hanaovana antso an-tsary avy amin'ny fitaovana Android
Ny rindranasa tsara indrindra hamoahana sy hamoahana ny rakitra amin'ny Android
Androany izahay dia manome safidy anao miaraka amin'ireo rindranasa tsara indrindra haneriterena, hanafoana ary hitantana ireo rakitrao voahidy ao amin'ny Android
[APK] Sintomy ary apetraho ny Snapchat beta farany izay mamela anao hanisy hitsin-dàlana toy ny sariitatra amin'ny olona mifandray aminao
Sintomy ary apetraho ny Snapchat beta farany misy safidy manintona toy ny famoronana hitsin-dàlan'ny fifandraisanao ho emojis.
[APK] Sintomy sy apetraka ny rindrambaiko fitetezana Internet an'ny Samsung amin'ny Android rehetra
Eto ianao dia manana ny apk ilay rindrambaiko fitetezana Internet an'ny Samsung tany am-boalohany hametrahana azy amin'ny karazana terminal Android, na dia tsy Samsung aza.
[APK] Facebook Flash, ilay fampiharana izay mifaninana amin'ny Snapchat ary tena milay
Eto aho na avelako ny apk an'ny Facebook Flash, karazana Facebook toy ny Snapchat izay hanananao fotoana mahafinaritra hizarana ny tantaranao.
Plex for Android izao dia mampiditra hitsin-dalana amin'ny Nougat sy ireo fiasa vaovao hafa
Ny fampiharana Plex ho an'ny Android sy Android TV dia nohavaozina izay mampiditra endri-javatra vaovao maro toy ny hitsin-dàlana, ary ny fanamboarana bibikely
Fomba entina manamboatra Android amin'ny fomba tena tsotra
Amin'ity fampianarana video azo ampiharina vaovao ity dia mampianatra anao hampiasa Android amin'ny alàlan'ny fametrahana fampiharana izay tena mora ampiasaina aho.
[APK] Ny beta farany farany an'ny WhatsApp dia manampy sary masina samihafa ho an'ny antso an-tsary sy antso amin'ny resaka
Sintomy ary apetraho ny apk ny WhatsApp beta farany, izay misy ny fanovana ny interface chat, sary miantso video ary antso vaovao.
Fikirako Nova Launcher
Eto ianao manana ny fikirakirana Nova Launcher araka ny nanontanianao ahy, fandaminana manokana ato amin'ity kinova Nova Launcher Prime ity.
Glide, fampiharana horonantsary horonantsary hafa izay ho tianao
Eto aho dia mitondra anao ny zavatra mampihetsi-po amin'izao fotoana izao, fampiharana iray izay manana anarana Glide dia ahafahantsika manao resaka video amin'ny fomba hafa.
Ity ny Android-ko: Personalization sy ny rindranasa ampiasako isan'andro
Ity ny Android, ny fanaoko ary ny fampiharana ampiasako isan'andro amin'ny famerenana izay nitondrako tanteraka ny terminal Android-ko.
[APK] Sintomy ny kinova vaovao an'ny Alcatel's Launcher ho an'ny Android
Eto ianao dia manana ny apk ny kinova Alcatel Launcher vaovao sy farany indrindra manan-kery ho an'ny Android 4.1 na avo kokoa
Fomba telo samihafa hividianana fampiharana sy lalao ao amin'ny Google Play Store
Fampianarana Android fototra izay asehoko anao ny fomba ahafahanao mamela fomba fandoavam-bola ao amin'ny Play Store ary koa ireo fomba fandoavam-bola telo tohanan'ny Google.
Mpilalao mozika 3 ho an'ny efijery AMOLED
Amin'ity lahatsoratry ny horonantsary vaovao ity dia mitondra mpilalao mozika telo ho anao aho izay natao manokana ho an'ny efijery AMOLED, na dia azo ampiasaina amin'ny karazana efijery aza
Samsung Internet Beta, misy ny mpitety Internet ankehitriny
Samsung mandefa ny Samsung Internet Beta, ny fampiharana hijerena ny Internet avy amin'ny mpanamboatra Koreana izay miaraka amina andianà vaovao mahaliana
[APK] Fomba 2 hisintomana mozika maimaim-poana amin'ny kalitaon'ny feo faran'izay tsara mivantana avy amin'ny VK Music
Raha mitady ny misintona mozika maimaim-poana amin'ny kalitaon'ny feo faran'izay betsaka ianao, dia eo amin'ny toerana mety izany satria hasehoko anao ny fomba anaovana azy mivantana avy amin'ny VK Music.
Ny sary mihetsika tsara indrindra ho an'ny Android anao
Raha tianao ny manamboatra ny smartphone Android anao, miaraka amin'ity safidy anio ity dia hanana sary an-jatony maimaim-poana an-jatony isan'andro sy fotoana ianao
Mikaroka fitsapana beta ho an'ny GBoard sy Google Play Services i Google
Google dia mamolavola programa beta tester ho an'ireo kinova vaovao mivoaka amin'ny rindrambaiko GBoard sy Google Play Services.
Nintendo Switch, fehezo ny atiny ho an'ny ankizy kely amin'ny Android
Ny fifehezana ny ray aman-dreny amin'ny Nintendo Switch vaovao dia azo tantanana saika amin'ny fampiharana Android amin'ny takelaka sy finday.
Fanamarihana haingana mivantana eo amin'ny ridao fampandrenesanao Android
Fampiharana iray izay manampy anay handray Quick Notes mivantana eo amin'ny ridao fampandrenesana an'ny Android anao.
Ahoana ny fomba hamafana ny WhatsApp Status ary hiverina amin'ny WhatsApp mahazatra
Fampianarana azo ampiharina izay asehoko anao na dia misy horonan-tsary manamarina izany aza, ny fomba hanesorana ny WhatsApp Status ary hiverina any amin'ny WhatsApp mahazatra.
Ny fampiharana radio tsara indrindra ho an'ny Android
Ity no ahy ho an'ny fampiharana radio amin'ny Android tsara indrindra. Rindrambaiko hihainoana ny radio manerantany miaraka amina interface tsara.
Ny fanairana tsara indrindra ho an'ny Android dia antsoina hoe Timely ary io no atolotray antsika
Eto ianao dia manana lesona an-tsary izay anehoako anao ny zava-drehetra fa inona ho ahy no fanairana tsara indrindra omen'ny Android anay.
[APK] Ankafizo ny Cheetah Mobile's QuickPick tsy misy soritra intsony
Quickpick APK, ny galeria Android tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra, taloha kelin'ny nividianan'ny Cheetah Mobile azy sy namenoany azy tanteraka.
Ahoana ny fomba hamohana ny MAC amin'ny sensor an'ny dian-tànana amin'ny Android anao
Fampianarana azo ampiharina na fika tsotra izay hahafahantsika mamaha ny MAC amin'ny fantsom-panafody ny Android amin'ny fomba tena azo ampiharina.
[APK] Sintomy ary apetaho amin'ny keyboard Android Xperia ny keyboard vaovao Xperia XZ Premium
Tutorial video azo ampiharina izay asehoko anao ny fomba fampidinana sy fametrahana ny kitendry vaovao an'ny Xperia XZ Premium aseho ao amin'ny MWC17
Google dia manambara ny YouTube TV, ny sehatra fahitalavitra vaovao
Google dia nanambara ny fahitalavitra YouTube ny fandaharana amin'ny fahitalavitra mivantana 35 $ isam-bolana izay manomboka any Etazonia amin'ny faran'ny 2017
Dokotera ambony, ny dokoteranao amin'ny fampiharana
Ity MWC ity dia mitondra antsika ny fampiharana Top Top Doctor miaraka amin'ny vaovao manan-danja, ny resaka amin'ny dokotera sy ny mpandinika ny soritr'aretina
Raiso ny bokotra eo amin'ny efijery an'ny Pixel amin'ny Android tsy misy faka
Pixbar dia rindranasa vaovao misy ao amin'ny Play Store izay hanananao ny bokotra eo amin'ny efijery Pixel amin'ny ankamaroan'ny smartphone Android
Google dia manambara ny fiafaran'ny Google Spaces
Google dia manambara ny fiafaran'ny fampiharana fandefasan-kafatra Google Spaces, izay tsy nanam-potoana hamitana herintaona teo anelanelan'ny Ello sy Duo
Ataovy avo roa heny ny WhatsApp ao amin'ny rindrambaiko marobe Android Nougat hahafahana manao resaka WhatsApp roa miaraka amin'ny fotoana iray
Amin'ity karazana fampianarana azo ampiharina ity dia asehoko anao ny fomba fanahafana ny WhatsApp amin'ny efijery mizara Android Nougat, manan-kery io saika ho an'ny fampiharana rehetra.
[APK] Sintomy sy apetraka ny kinova Google Play Music 7.4 vaovao feno
OS ampianarinay ny fomba fisintomana sy fametrahana ny Google Play Music 7.4 vaovao izay feno vaovao sy fanovana miavaka
Mpilalao mozika Android maivana sy miasa 3
Eto aho dia mitondra Mpilalao mozika 3 manaitra ho an'ny Android, tena maivana sy fampiasa izay tsy tokony halainao na tsia.
Izany no fiasan'ny status WhatsApp vaovao
Asehonay aminao ny fomba fiasan'ny status WhatsApp vaovao izay efa azon'izy ireo natao tamin'ny fampiharana anao ary manontany tena ianao hoe inona izany.
Ny kinova Google Maps vaovao dia mitondra fanatsarana miavaka [APK]
Ny kinova 9.47 an'ny Google Maps ho an'ny Android dia misy andian-dahatsoratra sy fanatsarana ny fivezivezena izay ahafahan'ny rindrambaiko mora azo kokoa
Asehonay anao ny fampiharana efatra tsara indrindra hihainoana mozika mivantana
OS asehontsika ary ataontsika mifanatrika ireo rindranasa efatra tsara indrindra hihainoana mozika amin'ny streaming, roa misy safidy fihainoana maimaim-poana ary roa miaraka amin'ny karama.
Dropbox Paper na ny fomba fanamorana ny asan'ny tarika
Dropbox Paper dia fotoana lehibe ahazoana manao tetik'asa isam-bondrona izay tsy maintsy hanamafisana ny fivezivezena eo amin'ireo mpandray anjara samihafa
[APK] Ny fampiharana tsara indrindra amin'izao fotoana izao hijerena tele maimaimpoana
Ity dia tsy isalasalana fa ny apk tsara indrindra amin'ny fotoana hijerena fahitalavitra maimaim-poana, na fantsona misokatra izy ireo, fantsom-bola ary koa fantsom-pahalalana ho an'ny olon-dehibe.
Microsoft mandefa Skype Lite amin'ny Android ho an'ny India sy ny tsena hivoatra
Manaraka ny dian'ny Facebook i Microsoft raha ny momba ny fandefasana fampiharana izay kely kokoa noho ny habeny sy ny fampiasana data miaraka amin'ny Skype Lite.
Efa manana fanjakana WhatsApp misy any Espana izahay
Azonao atao izao ny mampihetsika ny WhatsApp Status hizara ireo fotoana fohy miaraka amin'ireo fifandraisana rehetra azonao amin'ny fandaharam-potoananao.
SwiftKey for Android izao dia manohana fiteny mihoatra ny 150
Ilay rindrambaiko fitendry SwiftKey fanta-daza ho an'ny Android izao dia manohana fiteny sy fitenim-paritra 153 totalika, mandresy ny kitendry Google GBoard.
Manomboka ny fametrahana ny WhatsApp Status na ny WhatsApp Status
Ny satan'ny WhatsApp dia fotoana fohy izay voatahiry ao amin'ny satan'ny mpampiasa mandritra ny 24 ora mba ho hitan'ny hafa.
Alefaso ny fihetsika amin'ny bara fizahana
Amin'ity fampianarana video azo ampiharina ity dia asehonay anao ny fomba ahafahan'ny fihetsika amin'ny bara fiasa hanomezana ny Android fampiharana bebe kokoa raha azo atao.
Ahoana ny fampiasana Google Photos avy amin'ny PC na fitaovana hafa ampiasana ny Internet browser (Nohavaozina ny fampianarana Video nampiana)
Fampianarana azo ampiharina raha azo antsoina izany noho ny fahatsorany mahatalanjona, izay ampianarinay anao hampiasa ny Google Photos avy amin'ny PC.
Ahoana ny fahitana ny bateria sisa tavela amin'ireo fitaovana Bluetooth mifandray aminao amin'ny findainao finday avo lenta
Te hahita ny bateria sisa tavela amin'ireo fitaovana Bluetooth mifandray aminao amin'ny findainao? Raha eny ny valiny dia omenay anao ny vahaolana.
EasilyDo dia tonga amin'ny Android, mpanjifa mailaka izay nahomby tamin'ny iOS
EasilyDo, iray amin'ireo mpanjifa mailaka lamaody iOS indrindra, dia efa manana ny kinova ho an'ny fitaovana Android ao amin'ny Play Store.
Tinder dia vita amin'ny fividianana fampiharana horonantsary amin'ny Snapchat
Tinder dia te hampiditra ny horonantsary rehefa mividy Wheel, fampiharana iray izay manan-danja tokoa noho ny fitoviana amin'ny Snapchat.
Ahoana ny fomba famoronana rindranasa hetsika ho an'ny rafitra. (Hitsin-dàlana)
Fampianarana iray, tsotra izay misy, izay ampianariko azy ireo hamorona rindranasa momba ny rafi-pandaminana na ny hitsin-dàlan'ireo fikirakirana rafitra be mpampiasa indrindra.
Nanambara i YouTube fa nanao subtitle video 1.000 miliara ho azy izy io
YouTube dia nanao subtitle automatiquement video 1.000 miliara ary ankehitriny dia manohana fiteny 10.
Skype dia mampiditra fanehoan-kevitra amin'ny antso sy hafatra, tontonana fikarohana vaovao ary maro hafa
Skype ho an'ny iOS sy Android dia hampiditra fiasa vaovao toy ny fanehoan-kevitra amin'ny hafatra sy antso, fakan-tsary vaovao mifangaro ary maro hafa
Flamingo, mpanjifa Twitter ho an'ny Android, nohavaozina miaraka amina kisary vaovao, sarimiaina ary maro hafa
Flamingo dia iray amin'ireo mpanjifa Twitter tsy ofisialy tsara indrindra ary ankehitriny nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana ilaina sy azo ampiharina
Ahoana ny fananana ny bara fitetezana eo amin'ny efijery amin'ny Android rehetra, eny fa na eo amin'ny terminal aza misy bokotra ara-batana
Azavainay ny fomba hananana ny bara fitetezana eo amin'ny efijery amin'ny Android tsy mila Root, Andao hojerentsika hoe inona ny bokotra eo amin'ny efijery.
[APK] Ianao Tube Go tsy misy ao amin'ny firenenao?. Ity ny APK ofisialy ary hasehonay anao ny fomba fampiasana azy handefasana horonantsary avy amin'ny You Tube
Tsy misy ve ny Tube Go anao any amin'ny firenenao? Aza manahy fa hasehonay anao ny fomba fisintomana, fametrahana azy ary ny tetika hampiasana azy handefasana horonantsary avy amin'ny You Tube
Snapchat dia manomboka mifantoka amin'ny Android hampitombo ny isan'ny mpampiasa
Nihemotra i Snapchat, ary rehefa avy nametraka ny laharam-pahamehana amin'ny iOS, dia voatery mijery ny Android hivoatra ivelan'ny faritry ny fireneny.
AccuWeather dia mandefa ny fampiharana irery ho an'ny Android Wear 2.0
AccuWeather, ilay fampiharana ho an'ny vinavinan'ny toetr'andro, dia efa manana rindrambaiko mahaleo tena ho an'ny Android Wear 2.0 ary manampy kalitao bebe kokoa amin'ity OS ity.
Fifandraisana azo antoka avy amin'i Google, ilay fampiharana afaka mamonjy ny ainao
Faly aho manolotra anao ny fifandraisana atokisanao izay ho ahy no lasa fampiharana ilaina satria fampiharana afaka mamonjy ny ainao izany.
Google Assistant dia afaka mizara ny mombamomba anao amin'ny resaka Allo
Allo dia rindrambaiko fifampiresahana vaovao an'i Google izay tsy nidina, fa manohy mandray vaovao toy ny fahaizana mizara mombamomba anao manokana
Ny Launcher Android tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra dia antsoina hoe Launcher LAB. Ampianarinay anao ny fomba hampiasana izany mba hamoronana Launcher namboarina manokana
Ny Launcher Android tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra dia antsoina hoe Launcher LAB ary izy no Photoshop an'ny Android Launchers izay mamela antsika hamorona ny Launcher.
Uber dia efa manana ny rindrambaiko mahaleo tena misy ho an'ny Android Wear mba hahafahanao mangataka fiara sy manao asa vitsivitsy.
FaceApp dia misy amin'ny Android izao
Azonao atao izao ny misintona ny iray amin'ireo rindranasa mafana indrindra amin'ny fotoana toy ny FaceApp, azo alaina androany amin'ny Android hametahana tarehy miaraka amin'i AI.
Yelp dia mandefa fiasa vaovao hangataka fampahalalana momba ny karazana orinasa
Raha mitady fampahalalana manokana ianao dia azonao atao ny mangataka karazana fanontaniana iray ao amin'ny Yelp mba hamalian'ny mpampiasa azy.
Facebook dia milalao horonantsary mandeha am-peo amin'ny alàlan'ny default
Tsy maintsy milentika ao anaty ny fampiasa amin'ny rindrambaiko finday Facebook ianao mba hahafahanao mamono ilay feo izay hotendren'ny default.
Samsung mandefa Samsung Calculator ao amin'ny Play Store
Samsung dia mamoaka ny Samsung Calculator ho fampiharana manan-talenta hafa hahafahana mifantoka amin'izay tena zava-dehibe amin'ny fanavaozana ny firmware
Chrome Beta 57 dia manampy fanaraha-maso feno kiheba amin'ny kiheba manokana
Chrome Beta 57 dia mitondra tohana feno ho an'ireo takelaka manokana hampiasana azy ireo amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo miaraka amin'ny asany feno.
Mpilalao mozika ho an'ny Android miaraka amina ekipa mampitovy feo
Eto ianao dia manana mpilalao mozika ho an'ny Android miaraka amina ekipa mampitovy feo. Mpilalao mozika hafa sy maro loko izay ho tianao.
Efa fantatry ny fakantsary Nest ny toa varavarana ary afaka manara-maso azy ireo
Nahazo fahaiza-manao amin'ny fahitana i Nest ary ny vaovao farany dia misy koa ny vaovao mifandraika amin'ny kinova Android Nougat.
Ny Apps Instant dia manomboka haparitaka
Ny Instant Apps dia fampiharana mamela anao misintona ampahany kely aminy hanombohana azy amin'ny valin'ny fikarohana.
Fampiharana tena ilaina hihainoana ny radio amin'ny Andro Iraisam-pirenena amin'ny Radio
Amin'ny Andro eran'izao tontolo izao amin'ny radio, dia atolotray anao ny fampiharana ilaina (sy ny solony) mba hankafizanao an'ity haino aman-jery ity amin'ny karazany rehetra.
Ahoana ny fomba hamoronana ny sary miaina an-tsary
Raha te hahafantatra ny fomba hamoronana sary an-tsary an-tsary anao haingana sy haingana ianao dia tsy tokony halahelo an'ity lahatsoratra ity ianao.
Azonao zaraina amin'ny namanao izao ny lisitry ny toerana Google Maps tianao indrindra
Google Maps dia nohavaozina miaraka amin'ny endri-javatra miavaka mba hizarana ny lisitry ny toerana tena tianao amin'ny namana na fianakaviana.
BOX ho an'ny Android dia manampy fanohanana amin'ny tanan-tanan'ny rantsantanana
Ny serivisy cloud storage Box dia manavao ny fampiharana Android amin'ny alàlan'ny fampidirana fanohanana amin'ny hidin-tanan'ny rantsantanana
Prince dia misy ao amin'ny Google Play Music sy serivisy streaming hafa
Araka ny efa ninavinaina tamin'ny herinandro lasa teo, ny ankamaroan'ny katalaogan'ny mpihira tara ...
Pinterest manampy fitaovana vaovao telo amin'ny fampiharana azy
Manolotra ireo fitaovana vaovao natolotr'i Pinterest (na hanampy) amin'ny fampiharana azy izahay: Lens, Hevitra Instant ary miantsena ny endrika.
Avelan'ny YouTube hanamboatra ny fotoana mandroso sy mihemotra [APK]
Amin'ny alàlan'ny kinova YouTube vaovao dia azonao atao ny misafidy ny faharetan'ny mitsambikina mandroso na mihemotra amin'ireo safidy maro azo atao
Hidin-efijery misy sensor misy ny dian-tànana sy maro hafa….
Te ho afaka hanao hidin-trano ve ianao noho ny sensor amin'ny dian-tanan'ny Android anao? Eny, amin'ity fampiharana maimaim-poana ity dia ho azonao amin'ny fotoana fohy.
Telegram dia azo alaina amin'ny Android Wear 2.0
Telegram dia iray amin'ireo fampiharana amin'ny chat voalohany izay manararaotra ny Android Wear 2.0 ho azo alaina amin'ilay kinova OS izay novaina natao ho an'ny akanjo azo anaovana.
3 Browser File maimaim-poana ho an'ny Android Tsotra be ary tsy misy doka na fividianana ao anaty app
Ireto misy mpikaroka rakitra telo ho an'ny Android, maimaimpoana tanteraka, tsotra sy tsotra ary tsy misy doka na fividianana fampiharana.
Ooniprobe avy amin'i Tor Project dia mamela anao hijery tsara ny sivana amin'ny Internet
Raha te hahafantatra ianao raha misy tranokala ao amin'ny firenena iray sakanan'ny sivana, dia hanampy anao ity fampiharana antsoina hoe Ooniprozy ity.
Azonao atao izao ny mampandeha ny fanamarinana 2-dingana ao amin'ny kaonty WhatsApp anao
Efa amina volana vitsivitsy izy io tao amin'ny kinova Android sy Windows Phone. Androany ny fanamarinana 2-dingana dia tafiditra ao amin'ny WhatsApp
HabitHub, mety ilay fampiharana Tracker fahazarana tsara indrindra
Raha te hihena ianao na hianatra bebe kokoa isan-kerinandro, ny HabitHub angamba no fampiharana tsara indrindra handraisana ireo tombony azo isan'andro.
Nanjary haingana kokoa ny Evernote rehefa nifindra tany amin'ny lampihazo an'ny Google
Amin'ny alàlan'ny famindrana ny angon-drakitra marobe ao amin'ny Google Cloud Platform, Evernote dia haingana kokoa ary hampifantoka ny ekipanao amin'ny fampivelarana ny serivisy.
Nahatratra 200 tapitrisa ny mpampiasa Facebook Lite; mandray fanatsarana ny fahombiazana
Nahatratra 200 tapitrisa mpampiasa eran-tany ny Facebook Lite. Izy io koa dia havaozina miaraka amin'ny fanatsarana ny fampisehoana.
[APK] YouTube Go dia fampiharana vaovao an'i Google hitahiry angona rehefa mijery horonantsary
Azonao atao izao ny misintona ny fampiharana YouTube Go vaovao hitehirizana ny angon-drakitra momba ny drafitrao satria natokana ho an'ny tsena misimisy izany.
Afaka misolo ny fampiharana toetr'andro izao ny Facebook
Avy amin'ny fampiharana Facebook ho an'ny findainao finday avo lenta no hahafahanao mahafantatra ny fampahalalana rehetra momba ny toetrandro avy amin'ny faritra natokana ho azy.
Ataovy boribory miaraka amin'ity rindrambaiko ity ny zoro amin'ny findainao
Raha mitady fanaingoana bebe kokoa amin'ny finday avo lenta ianao ary tianao ho boribory ny zorony finday avo lenta dia teraka ho anao i Cornerfly.
Ahoana ny fananana bokotra fitetezana toy ny Pixel amin'ny Android tsy misy ROOT
Raha te hanana ny bokotra fitetezana ny Google Pixel sy Pixel XL ianao, miaraka amin'ity rindrambaiko ity, tsy mila ROOT dia azonao atao amin'ny Android-nao
Misedra fiantsoana horonantsary amin'ny Android beta ny signal
Ny fitsapana signal dia antso an-tariby miantso ny end-to-end miantso video amin'ny beta. Mila mandeha any amin'ny fikirakiran'ny fampiharana ianao mba hampavitrika azy.
Sound Off Reborn 2017 dia manao fandaharam-potoana hampanginana ny telefaona amin'ny fotoana sasany
Sound Off Reborn 2017 dia fampiharana mahaliana amin'ny fanatsarana ny fampiasa "aza manelingelina" an'ny telefaona Android. Fitaovana hampanginana ny finday.
Ahoana ny fomba hanahafana ny biraon'ny Windows amin'ny Android
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehoko anao ny fomba fanahafana tanteraka ny biraon'ny Windows amin'ny terminal Android noho ny fametrahana tsotra ny fampiharana maimaimpoana.
Action Launcher dia mitondra ny hitsin-dàlan'ny Pixel Launcher ho beta
Action Launcher beta dia mitondra ny hitsin-dàlan'ny fampiharana Pixel Launcher hahafahanao mizaha toetra azy ireo alohan'ny kinova farany
Ahoana ny fomba fanahafana tsara ny foana amin'ny Samsung Galaxy S7
Te-haka tahaka tonga lafatra ny fampiasa foana amin'ny Samsung Galaxy S7 ianao? Raha izany dia entiko ho anao ny fampiharana tonga lafatra hahatratraranao azy.
Azonao atao izao ny manindry indroa amin'ny YouTube handroso 10 segondra na hiverina
Raha te-hanome fiainana bebe kokoa an'ireo fananahana ao amin'ny YouTube ianao dia afaka tsindrio indroa izao handroso na hihemotra amin'ny famokarana
Peek Launcher dia mpandefa fampiharana izay mianatra avy amin'ny fahazaranao
Raha mitady launcher ianao izay mamela anao hiditra amin'ny fampiharana avy amin'ny keypad nomerika T9 ary mianatra amin'ny fahazaranao, ny Peek Launcher no tena mety.
Google Maps amin'ny Android dia havaozina miaraka amin'ny fampahalalana momba ny zotra sy bebe kokoa amin'ny fotoana tena izy
Rehefa mankany amin'ny toerana halehanao ianao, Google Maps, amin'ny fihetsika miakatra, dia hampiseho aminao ny orinasa amin'ny fotoana tena izy mba hahafahanao mankany amin'izy ireo.
Google dia manandrana endrika vaovao amin'ilay fizarana «Ny fampiharana»
Google dia manandrana famolavolana vaovao an'ny fizarana ny My applications ao amin'ny Play Store miaraka amin'ny safidinao vaovao, fampahalalana ary kiheba
Mpilalao mozika Android mahafinaritra miaraka amin'ny fanohanan'ny Snaptube
Leo ny mpilalao mozika ho an'ny Android? Androany aho mitondra mpilalao mozika mahafinaritra ho anao amin'ny Android miaraka amin'ny fanohanan'ny Snaptube.
Ahoana no ahitanao azy ilay horonan-tsary YouTube mihaino anao
Music Mate dia fampiharana vaovao izay ao anaty beta izay mahita ho azy ny horonantsary YouTube amin'ilay hira mandeha
Ahoana ny fomba hamoronana horonan-tsarimihetsika anao hizarana amin'izay tianao amin'ny MadLipz ilay lamaody lamaody
Androany aho dia mitondra horonan-tsary tena mahafinaritra iray izay anehoako anao ny fomba famoronana motera video na meme video anao hizarana amin'izay tianao.
Mamorona meme an'ny Trump anao miaraka amin'i Donald Draws ho an'ny Android
Ankehitriny ianao dia afaka mamorona meme tany am-boalohany sy mahatsikaiky ny filaharana Trump afaka segondra vitsy monja ary afaka mizara amin'ny tambajotra sosialinao
Ny hitsin-dàlana amin'ny Apps Web dia hiasa tsy ho ela amin'ny findainao
Chrome dia eo amin'ny toerana tena miavaka amin'ny fampidirana ny Web Apps, izay hitovizany amin'ny toetran'ireo fampiharana teratany eo amin'ny birao.
Google Photos 2.8 dia manova ny toerana misy ny lahatahiry ao amin'ilay fitaovana
Google Photos dia nohavaozina mba hahafahanao mahita haingana kokoa ireo sary hita ao amin'ny fitadidianao eo an-toerana ny findainao.
SPECTACULAR !!. Ny fomba tsara indrindra hitantanana fifandraisana amin'ny Android
Raha mitady ny fomba tsara indrindra hitantanana ny fifandraisanao amin'ny Android ianao, anio dia entiko ho anao ity fampiharana Dialer sy Contact mahavariana ity izay azo antoka fa tsy hamela anao tsy hiraharaha.
Ahoana ny fomba fampidirana takelaka fanoratana faharoa amin'ny rakitrao ao amin'ny Google Drive na Dropbox
Raha mitady hanana fiarovana bebe kokoa amin'ny kaontinao fitahirizana rahona ianao, toa ny Google Drive na Dropbox, dia Cryptomator no notadiavinao.
Viber izao dia misy fameram-potoana ho an'ny sary sy horonantsary manimba tena
Toy ny Snapchat sy serivisy maro hafa, azonao atao ny mamaritra fotoana voafetra ho an'ny mpanelanelana izay hozarainay amin'ny Viber hanimba tena.
WhatsApp dia nihoatra ny 1.200 tapitrisa mpampiasa mavitrika
Saika ivelan'ny sarintany ny WhatsApp noho ireo mpampiasa mavitrika 1.200 miliara natolotr'i Mark Zuckerberg tamin'ny famintinana isan-taona.
Manatsara ny fahombiazan'ny Chrome 56 ho an'ny Android ary manampy safidy fampidinana vaovao
Chrome update 56 dia manatsara ny fahombiazan'ny browser web raha oharina amin'ireo kinova taloha.
Instagram dia manandrana rakipeon-tsary marobe amin'ny andiany 10.7.0
Hivoaka ny Instagram ary amin'ity indray mitoraka ity dia hitondra antsika mampiavaka tena manan-danja amin'ny alàlan'ny fametrahana sary marobe ao amin'ilay lahatsoratra ihany.
Nanenjika ny WhatsApp ny fizarana angon-drakitra momba ny mpampiasa nefa tsy nahazoana alalana
Misongadina indray ny WhatsApp avy amin'ny fikambanan'ny mpanjifa any Alemana izay maniry ny hamafana ny angon-drakitry ny mpampiasa rehetra.
Facebook dia miasa amina fampiharana vaovao handefasana seho
Facebook dia te-hifaninana amin'ireo sehatra lehibe amin'ny horonan-tsary sy streaming miaraka amina fampiharana vaovao mifantoka amin'ny seho sahala amin'ny fahitalavitra 10 minitra
Resident Evil 4 Mobile Edition, na rehefa mety ho an'ny PS2 ny lalao finday
Raha nostalgika ianao ary ny resan'ny Resident Evil saga dia resa-be dia be ny zava-drehetra dia ny mitady ny Resident Evil 4 Mobile Edition ary mividy azy.
Google manatsara ny Snapseed amin'ny fitaovana miolakolaka ary manamboatra ny fahitana ny tarehy
Snapseed dia havaozina amin'ny farany miaraka amin'ny kinova lehibe vaovao izay mampifangaro ny fitaovana curves ary manatsara ny fahitana ny tarehy.
SoundCloud dia mampiseho anao ny mozika malaza indrindra amin'izao fotoana izao
Ny SoundCloud dia manampy anao bebe kokoa hahita ny mozika tianao amin'ny fampidirana ny lisitra "New Releases" sy ny "Top 50" na eo amin'ny sehatra manerantany na amin'ny karazany.
Mikasa ny hanampy Video Streaming News Service amin'ny alàlan'ny Acquiring Watchup i Plex
Amin'ity fividianana ity dia manatevin-daharana serivisy streaming video ho an'ny vaovao natolotry ny Watchup nandritra ny fotoana ela i Plex. Tena azo.
DigiCal Calendar dia fampiharana misy endri-javatra maro tsy hita ao amin'ny Google Kalandrie
Google Kalandrie dia iray amin'ireo fampiharana kalandrie tsara indrindra, fa ny DigiCal Kalendrie dia iray hafa izay mampiasa ny lesoka mba ho safidy hafa.
Lyft dia afaka mahazo toeran-kaleha mivantana amin'ny kalandrie findainao
Lyft dia serivisy mifaninana amin'i Uber ary nohavaozina miaraka amina endrika iray ahafahanao mahazo ny adiresin'ny kalandrie.